Saturday October 17, 2020 - 09:03:19 in Articles by Hadhwanaag News
Khasaaraha dagaalka ka dhashay wuxuu ahaa mid aan la soo koobi karin, balse waxaynu soo bandhigi doonaa intii suurtagal ah. Dhinaca ciidanka max’ed siyaad waxa ku dhacay jab-weyn waxa lagaga diley dagaalka 170 askari, halka 11 baybayna lagaga gubay. Dhinaca SNM waxa laga diley 27 askari. Rag waaweyn ayaa labada dhinacba kaga dhintay dagaalka. Dhinaca SNM waxa ku dhintay mujaahid Max’ed Xaashi Dhamac "lixle”.